I-Novopassit enoxolo: ukubuyekezwa nezincomo zokusetshenziswa
Ngezinye izikhathi kwenzeka ukuthi awukwazi ukwenza ngaphandle kokusebenzisa isidakamizwa, bese udinga ukuyeka ukukhetha kwakho kunoma yimiphi imithi, ebangeni elikhulu elilethwe kuma-pharmacy. Kuzo zonke ezinye kungenzeka ukuthi unikeze umkhiqizo wezokwelapha "i-Novopassit", izibuyekezo zazo ezinikezwa ngezinamba ezinkulu futhi ikakhulukazi zihle.
Lokhu ukuguqula izakhi ze-herbal akusikona nje ukulimaza, kodwa futhi kukhulula ukukhathazeka, okubaluleke kakhulu emazweni acindezelayo. Ngaphezu kwalokho, lesi sidakamizwa sinomthelela ekuqedeni ukucindezeleka kwengqondo, ukuphumula kwemisipha ebushelelezi, ukuqeda ukwesaba.
Imithi ephumelelayo i-Novopassit, ukubuyekezwa kwalokhu kufakazela, nge-neurasthenia ngamafomu amancane, kuhambisane nokucasula, ukukhathazeka, ukukhathala, izinkinga zememori. Ngaphezu kwalokho, lesi sidakamizwa singasetshenziselwa ukukhathazeka okuncane nezinkinga zokulala, i-migraines, i-climacteric syndrome.
Akunconywa ukusebenzisa umkhiqizo lapho uhamba nengane (ikakhulukazi ezinyangeni zokuqala), ukuncelisa, ukuzwela ezintweni eziqukethe izidakamizwa, isithuthwane, iminyaka engaphansi kweminyaka engu-12, izilonda eziphilayo zomuthi wamathumbu. Kanti futhi kumuthi we-Novopassit wezidakamizwa, kunezingqinamba ezifana nokuphuza utshwala kanye nezidakamizwa eziqukethe utshwala.
Ezimweni eziningi, umzimba uyawubekezelela kahle. Ngezinye izikhathi imiphumela emibi enjengesizungu, ukulala, ukuphendula okweqile, izinkinga ezivela emaphethelweni emathunjini angase zivele. Uma zivela, izidakamizwa zikhanseliwe, futhi kufanelekile ukubonisana nodokotela ukuze uthole iseluleko.
Amacala okudlula ngokweqile akuvamile, kepha uma kwenzeka, ukwelashwa, kaningi, kuzobekwa ukuthi kunesifo. Ukuphendulwa kwesimo salesi simo kuyisicasuli, ukucindezeleka, ukugubha okukhulu, ubunzima esiswini kungenzeka. Ukuze uvimbele lokhu kungenzeki, kufanele ufunde ngokucophelela imiyalelo enikezwe umenzi wezokwelapha we-herbal Novopassit. Incazelo yomkhiqizo nokubunjwa kwayo ingatholakala lapho.
Ngakho-ke, phakathi kwalezi zakhi kufanele zinikezwe i-valerian yokwelashwa, i-wort yaseSt. John, i-Melissa, i-hawthorn, i-passionflower ne-guaifenesin. Kuyinto yokugcina eyinomthelela wokulwa nokukhathazeka. Ungakhetha uhlobo lokukhululwa ngesimo samathebulethi noma isisombululo.
Kulesi simo, isicelo sokujwayelekile sokulala kusho ukubuyekezwa kwe-Novopassit okuphambene kakhulu. Kodwa-ke, iningi liguqula eyodwa. Umthelela onjalo, njengoba uzonginika ukuthula (okungukuthi, ukulala okwesikhashana ngemva kwephilisi), i-agent iyenomphumela omuhle, wokutholisa, kancane kancane ukugcina ukulala kwemvelo kancane kancane.
Ukuze umuthi ufinyelele umgomo wawo, kodwa awulimazi umzimba, kubalulekile ukugcina umthamo, okuyizikhathi eziningi udokotela oqoka. Imfundo yalesi senzakalo sincoma ukuthatha ukuthatha izidakamizwa izikhathi ezintathu ngosuku nge 5 ml. Ungaphuza isigamu sepuni isipuni ekuseni nango-ntambama, futhi sikubambe ebusuku. Ngaphambi kwezimo ezicindezelayo ezifaka umthwalo ngokomzwelo (ukuhlolwa, umhlangano, njll), kwanele ukufaka kanye kuphela isigamu sehora 5 ml. Uma kunesidingo, umthamo wanda, kodwa hhayi ngaphezu kuka-10 ml. Kodwa-ke, kufanelekile ukukhumbula ukuthi njenganoma imuphi omunye umuthi we-Novopassit, okwanele, kufanele uthathwe ngemuva kokubonisana nodokotela.
Ekudleni kuyadingeka ukuba uqaphele lapho ushayela imoto kanye nomsebenzi onobungozi ohlangene nezinyathelo ezihambayo njengoba kungalindeleka ukuthi kwenzeke kanjani. Imiphumela emibi yalesi sidakamizwa ingandisa ukwethulwa kwesisindo esisodwa ngesikhathi esisodwa. Uma izakhi zozalo zomlomo zisetshenziswe ngesikhathi esifanayo, kungase kube nokungahleleki emjikelezweni wesimiso.
I-Cream-wax "Ephilile" evela ku-psoriasis: ukubuyekezwa, ukwakheka, okusize kuye. Kungenzeka yini ukwelapha i-psoriasis kuze kube phakade?
"I-Lopeium" yalokho okusizayo? Ukufundisa, amanani, ukubuyekezwa
Ukulungiselela "Phosphogliv": ukubuyekezwa nemiyalelo
Isidakamizwa "Omeprazol": imiyalelo yokusetshenziswa.
"Utrozhestan": incazelo, imiyalelo yokusetshenziswa kanye nempendulo. "Utrozhestan" ekukhulelwe
Doves, izikhova futhi larks: kwencazelo chronotype womuntu
Ingabe ngidinga umbuthano izingane?
Ukukhishwa kwezinsuku zeholide ezingasebenzi lapho uhamba ku-1C ZKUP: ukuthunyelwa, imiyalo
Pancreatitis olunamandla: ekwelapheni lesi sifo
Parakeet Sun parakeet: izithombe kanye nokubuyekeza
Ukusetshenziswa "Viardot Forte" zomuthi
Comedy "indiza omthende": nabalingisi. Amaqiniso ethakazelisayo ukudutshulwa the comedy
Novosibirsk Military Institute Russian Interior Umbutho
Indlela ukupenda eyelashes ukubheka umbukwane